9 shay oo la sameeyo marka SEO Pro-gaaga shaqada ka tago | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/9 waxyaabood oo la sameeyo marka SEO Pro-gaaga uu joojiyo
9 waxyaabood oo la sameeyo marka SEO Pro-gaaga uu joojiyo
Xirfadlayaasha SEO waxay ku jiraan baahi badan. Marka taadu joojiso, ka faa'iidayso fursada aad ku gasho booska oo aad ku dhisto dadaaladii hore.
Farsamaynta-matoorka-raadinta ee shirkadda ecommerce-ka ayaa ugu dambayn bixi doonta. Waa kan waxa xiga la sameeyo
Marka hore waydii sababta. U caddee in aad doonayso in ay jawaab-celinteeda ka dhigto barnaamijka mid xooggan. Ma waxay dareemaysaa shaqo badan, mushaar la'aan, ama aan la mahadin? Waxaa laga yaabaa in aysan jirin meel loogu talagalay koritaan, ama aysan awoodin inay horumar sameyso caqabado urureed awgeed? Si kasta oo ay u adag tahay, si dhow u dhegayso. Baro waxaad samayn karto si aad u horumariso jihada barnaamijka SEO, shaqaaleysiinta, iyo taageerada.
Beddelka SEO Pro
Qor sharraxaadda shaqada. AWeydiiso SEO-gaaga tagaya inuu diyaariyo sharaxaad shaqo ama liiska mas'uuliyadaha. Ma jiro qof si fiican u yaqaan doorka.
Hel beddelka. Suuqa shaqaalaynta ayaa u kulul SEO-yada. Naftaada sii inta ugu badan ee suurtogalka ah si aad u hesho beddelka, iyada oo aan loo eegin heerka aad shaqaale qaadanayso. Suuqa waxaa buux dhaafiyay (i) shirkado raadinaya shaqaale leh xirfado aasaasi ah, falanqeeye si ay u qabtaan inta ay awoodaan oo ay wax ku bartaan jidka, iyo (ii) wakaaladaha doonaya musharaxiinta heerka-soo-galka SEO si loogu tababaro habka wakaaladaas.
Maareeyayaasha SEO iyo agaasimayaasha waxay leeyihiin khibrad aad u badan. In kasta oo ay yar yihiin furitaanka doorarkaas, waxaad weli u baahan doontaa soo jeedin tartan ah si aad u soo jiidato khibrad.
Ka fakar qaabkaaga taageerada SEO. Marka kooxdaadu isbedesho, waa wakhti fiican in la tixgeliyo fursadaha shaqaaleysiinta SEO. Ma koox ka mid ah? Xitaa xirfadlayaasha SEO ee ugu khibradda badan waxay rabaan saaxiib si ay uga hadlaan istiraatiijiyad iyo fikrado. Tixgeli koox laba-qof ah, ama shaqaale SEO ah iyo qandaraas hay'ad.
Wakaaladuhu maaha shirkad kasta, in kastoo. Haddii aad la shaqaynayso wakaalad oo shaqaalahaaga SEO uu ugu horrayn yahay maareeyaha mashruuca, tixgeli inaad shaqada guriga la keento koox.
Waxaan ka hadlay la shaqaynta wakaaladaha "For SEO, Better to Kire An Agency or Employee?" iyo "11 Hawlaha Muhiimka ah ee Wakaalada SEO."
Hubi xeeladda SEO iyo khariidad waddo. Tagitaankaaga SEO waxay u badan tahay inuu leeyahay xeelad iyo khariidad waddo. Hubi inaad haysatid labadaba, oo ay la socoto sharraxaadda shay kasta, ka hor intaanay bixin. Haddi meeshaas laga bilaabo la'aanteed, waxay u badan tahay in beddelka uu ka soo bilaabo eber iyada oo aan faa'iido laga helin taariikhda.
Faham hababka iyo xiriirada. Tagitaankaaga SEO wuxuu lahaan doonaa habab been abuur ah sida kulamo lala yeesho shaqaalaha tifaftirka ama horumariyaha, iyo warbixinta bilaha ah. Hel macluumaadka maalin kasta, toddobaadle, iyo hab-socodka bilaha ah, oo ay ku jiraan magacyada dhammaan dadka ku lugta leh. Weydii qaab-dhismeedka iyo agabka kale ee ay isticmaasho. Waxaas oo dhan waxay kaa caawin doonaan shaqaaleysiinta SEO-gaaga cusub.
Wax ka baro mashaariicda. Heer gaar ah oo taariikhda SEO ah ayaa la la'aayaa khabiirkaaga baxaya. Weydii inay sharaxdo mashaariicda hadda - cidda ku lug leh iyo yoolalka iyo caqabadaha. Waxaad go'aansan kartaa inaad hakiso mashaariicdan ama aad sii waddo ilaa aad ka keensato beddelka.
Sidoo kale, weydii pro SEO-ga baxaya inuu kuu sheego mashruucyadii muhiimka ahaa ee la soo dhaafay ee si toos ah u socday. Ma jiraan shuruudo qoran ama dukumeenti kale oo kooxda cusub ee SEO ay u baahan yihiin inay ogaadaan?
Weydiiso inay u gudbiso dhacdooyinka waaweyn ee SEO sida isbeddelada waxqabadka raadinta dabiiciga ah, oo ay ku jiraan sababaha iyo hagaajinta.
Hubi gelitaanka aaladaha SEO. Kahor intaanay bixin, waa inay ku darto mulkiilaha ama shaqaale sare maamule ahaan labadaba Google Search Console iyo Aaladaha Mareegaha Webmaster Bing ee subdomain kasta iyo goob kasta. Haddii kale, haddii xisaabaadyadu ay ku xidhan yihiin ciwaankeeda iimaylka gaarka ah, waxaad waayi doontaa gelitaankooda marka ay baxdo. Aad bay u adagtahay in dib loo xaqiijiyo akoonnadan meel eber ah marka loo eego in maamulaha hadda jooga uu kuugu daro akoontada (admin ahaan).
Sidoo kale, hubi inaad marin u leedahay aaladaha kale, sida meheradaha SEO ee ganacsiga (BrightEdge, Searchmetrics, seoClarity), aaladaha la dhisay (Majestic, Ahrefs, Moz), aaladaha maaraynta mashruuca (Jira, Trello) iyo qaab kasta ama jaangooyooyin kasta ku nool goobaha Google-ka (Google Docs, Google Drive, Google Data Studio). Ha sameyso liis qalab kasta oo leh magaciisa login iyo erayga sirta ah.
Haddii SEO-gaaga baxayaa u isticmaalo iimaylka agabkan, u samee ciwaanka iimaylka guud ee shirkadda oo weydii inay u beddesho iimaylka mulkiilaha ciwaankaas.
Ururi galalka Maalintii ugu dambeysay, weydii pro-gaaga SEO ee tagaya inuu soo geliyo dhammaan faylalka iyo qaab-dhismeedka suulka ama adeegga sida Dropbox si ammaan ah loo ilaaliyo. Ku kaydi koobi kumbuyuutarkaaga, sidoo kale. Xirfadlahaaga cusub ee SEO wuxuu u baahan doonaa faylashan.
Beddel furayaasha sirta ah Ka dib markii pro-gaaga SEO tago, beddel furaha sirta ah ee dhammaan qalabka ku jira liiskeeda. Qaarkood waxay leeyihiin kooto ama xeerar ka dhan ah isticmaalka xisbiyada badan. Ka badbaado wanaagsan oo ka xumahay, xitaa haddii aad si toos ah ugu kalsoon tahay bixitaankaaga SEO.
Waa maxay Guji-si-u-wax-ka-Beddel u samaynta Website-ka?
5 Noocyada Taageerada Naqshadeeye Shabakad kastaa wuxuu u baahan yahay